Izikhongozeli zeMigodi zeCrypto, iZinto ezintsha zeMigodi yeBitcoin, iCandelo leMigodi yoThutho-iTianqi
Isetyenzisiwe Hardware Hardware
Umenzi webhokisi yemigodi eyi-cryptocurrency enobungcali kunye nomthengisi woomatshini abasebenza ngokumba umgodi abalixabiso lisezantsi kakhulu kunexabiso lentengiso
Itekhnoloji ephambili Ngapha koko, ukusebenza kwayo kokunyaniseka kuphezulu kakhulu, okunokunciphisa ngempumelelo ubushushu kunye nokwandisa ubomi benkonzo kumatshini wokumba umgodi.
Ixabiso eliqinisekisiweyo kunye nexabiso eliphantsi: Ixabiso lebhokisi yemigodi eyenziwe yiTianqi Mining ayinakuphikiswa ngokusekwe kumgaqo wobulunga kuqala.
Umdibaniso oDibeneyo wokupholisa amanzi ohambisa amanzi
Izibonelelo zebhokisi yemizobo edityanisiweyo
ubungakanani bebhokisi ye-20-ore yebhokisi yokulinganisa iiseti ze-180, ukwandisa indawo
zamkele uyilo lomqolo ophindwe kabini, umoya ongaphezulu uphume, umoya osecaleni ungene
Qaphela imveliso ngobuninzi kunye nesantya sokuhambisa ngokukhawuleza
I-Antminer T17 + 58THs
Nceda uqaphele ukuba umbane ofunekayo we-T17 + ngu-220V.
Ukubonisana kwamkelwa ngeentsuku ezingama-365 ngonyaka, ungaqhagamshelana nathi nge-imeyile, ngefowuni, ngeSkype / ngeFacebook / nge-twitter! Iqela lethu elinamandla lobugcisa lihlala lilindile kwisicelo sakho.
Emva kokuqonda iimfuno zakho, siya kukunika iingcebiso zobungcali kunye neekowuteshini. Emva kokuba i-odolo iqinisekisiwe, imigca yethu emihlanu yokuvelisa iya kuqala ukuvelisa ngexesha elifanelekileyo, kwaye yenze uhlolo olufana novavanyo olusebenzayo kunye novavanyo olusemgangathweni wokuqinisekisa ukuba iimfuno zakho ziyafezekiswa ngokuchanekileyo.
Iqela emva kwentengiso liza kwenza amalungiselelo okuhamba okukhawulezayo kunye nokuthuthwa kwakho, ukulandelela kunye nokwazisa yonke inkqubo yokuqinisekisa ukufika kokhuseleko kuwe.
Ayinamsebenzi ukuba xa uneengcinga ezintsha okanye iingcinga okanye iimveliso ezikhoyo azinako ukuhlangabezana neemfuno zakho. Sitshele konke okudingayo, siya kuyila kwaye sivelise ngokweemfuno zakho ngokungqongqo, kwaye sihambise kuwe ngokukhawuleza okukhulu.
Ukwazi iimfuno zakho zemigodi ezingxamisekileyo, sizabalazela ukunciphisa naziphi na izinto ezingathandekiyo ngaphambi kokuziswa. Ukuba ungathanda ukukhetha iimveliso zethu, siya kuyifaka kwindawo. Ngobuchule bethu bobuchule, singayibeka ibhokisi yemigodi ukuba isetyenziswe ngokukhawuleza. Ke ixesha lakho elixabisekileyo lisindisiwe.
2020, inokuba ngunyaka wokulwa neBitcoin
Yintoni kanye le blockchain?
Kutheni i-Bitcoin ibiza kangaka? Yintoni i-Bitcoin exchange?
Amamitha angama-300 empuma yeSango laseMpuma yeMayini ye-Long Dong kunye neXuji Highway, Junction of Zhendong Ekuhlaleni, eLonggu Idolophu, kwiPee County, kwisiXeko saseXuzhou.
asic imigodi asic, Ikhonteyina ye-btc, isikhongozeli se-antbox, kusetyenziswa izixhobo zemigodi ye-crypto, isikhongozeli somlilo, Isitya sebhitmain,